Ndị na-emepụta ELECTRONICS - China ELECTRONICS Factory & Suppliers
Emechara ngwaahịa ahịa
Bank kaadị akwụmụgwọ naa naa igwe
✭ Nke a bụ akụkụ plastik mechiri emechi n'ime ụgbọ ala ahụ, na-eji ihe dị elu PA66 + 30% plastic na-eguzogide ọgwụ. Ọnọdụ gburugburu ebe obibi na-arụ ọrụ nke akụkụ a dị n'etiti -40 na +100 degrees. Ọ na-eguzogide ihu igwe n'èzí ma na-ezute ọkọlọtọ 5085 Volkswagen.
✭ Nke a plastic akụkụ bụ akụkụ nke a Oil nzacha Plastic ccessories si a German ahịa. Nsogbu kasịnụ nke akụkụ a bụ na mgbidi mgbidi ya bụ naanị 0.45mm. Setdị Ebu a na-agbaso ụkpụrụ HASCO. Isi ihe bụ 1.2343 (ESR) ígwè siri ike.
✭ Ọkpụkpụ ebu ahụ dịtụ mfe, ya na ihe nrụnye abụọ Becu. Ngwaahịa bụ PA6 + 30GF, na elu kwesịrị ịbụ VDI-24. Ọnụ ọgụgụ ziri ezi nke ngwaahịa achọrọ bụ +/- 0.05. Oge nnyefe ebu bụ ụbọchị iri anọ na ise, na usoro ntanye bụ 12 sekọnd. A nwalere ebu ahụ naanị ugboro abụọ, onye ahịa ya wee gwa anyị ka anyị hazie mbupụ na ụlọ ọrụ na-akpụzi ọgwụ na Germany.
✭ Ọ bụrụ na ị nwere ngwaahịa ndị yiri ya, biko egbula ịkpọtụrụ anyị. Anyị ga-abụ ezigbo onye ọlụlụ gị.
✭ Nke a bụ akụkụ plastik eji edozi PCBA, iji mee ka PCBA guzozie ma hụ na nkwụsi ike nke mgbaàmà nnyefe. Ihe ndị achọrọ maka akụkụ plastik a dị oke elu, na nkenke nke akụkụ nke ngwaahịa plastik ga-adị n'ime 0.02mm. Yabụ, ọ bụrụ na etinyere ọtụtụ kọntaktị nke PCBA, ngwaahịa ahụ enweghị ike ịkepụta akụkụ, a ga-arụzi ya ma mepụta ya na usoro mmịfe.
✭ Ihe dị elu nke na-eguzogide ọgwụ dị elu nke PC eji mee ihe plastik a bụ ihe eji eme ihe maka ọkụ ụgbọ ala. Ihe a nwere uru nke obere nrụrụ, nkwụsi ike dị mma, nguzogide okpomọkụ dị elu na nguzogide oyi.
✭ Setdị Ebu a na-agbaso ụkpụrụ HASCO. Ihe bụ isi bụ nchara ígwè 1.2343. The ebu Ọdịdị bụ dịtụ mgbagwoju Ọdịdị, mkpa iji exchangeable wet ka mmepụta anọ dị iche iche n'akụkụ. Ngwaahịa bụ PC, na elu kwesịrị ịbụ Polish 600. Product size ziri ezi chọrọ bụ +/- 0.02. Oge nnyefe ebu bụ ụbọchị 38, na usoro ntụtụ bụ 27 sekọnd. A nwalere ebu ahụ naanị ugboro abụọ, onye ahịa ya wee gwa anyị ka anyị hazie mbupụ na ụlọ ọrụ na-akpụzi ọgwụ na Germany.